अल्ट्रासोनिक एक्स्ट्रक्टर केको लागि प्रयोग गरिन्छ? - हिल्सचर
Utrasonic शीर्षक: "अल्ट्रासोनिक एक्स्ट्रक्टर केको लागि प्रयोग गरिन्छ?"
अल्ट्रासोनिक निकायहरू उत्तम उपकरण हुन् जब यो अल्ट्रासोनिक निष्कर्षण प्रक्रियाहरु को तीव्रता को लागी आउँछ। गैर-थर्मल विधिको रूपमा, हाउभाइजेशनले तापमान-संवेदनशील पदार्थहरू (उदाहरणार्थ विटामिन, स्वाद, एन्टीएक्सिडेंट, सीबीडी आदि) को क्षुधालाई रोक्छ। उच्च शक्ति अल्ट्रासाउन्ड लहरहरु को अनुप्रयोग को छेद र कोशिकाओं र ऊतकों को अवरोध को कारण हो र जन स्थानांतरण को बढावा दि्छ। यसको मतलब इन्ट्रासेलुलर सामग्री (यदी लक्षित पदार्थहरू) भित्री कक्षबाट रिजर्भ गरिएको छ र सल्विभरमा पठाइएको छ। अल्ट्रासोनिक निकासीले उच्च उत्पादन, उच्च निकासी गुणस्तर र छिटो प्रसोधनको परिणामस्वरूप निष्कर्षण प्रक्रियालाई तीव्र बनाउँछ। एकै समयमा, अल्ट्रासोनिक निकासी एक पर्यावरण अनुकूल, हरियो विधि हो।
कसरी सोनियमले तपाइँको निष्कर्षण प्रक्रियामा सुधार गर्न सक्छ भन्ने बारे थप पढ्नुहोस्!